Daruuro colaadeed oo dul hoganaya Kismaayo. [Dhegaysi …] – Radio Daljir
Daruuro colaadeed oo dul hoganaya Kismaayo. [Dhegaysi …]
Seteembar 30, 2009 12:00 b 0
Kismaayo, Sept 30 – Al-shabaab oo maamul cusub u magacaabay Jubada Hoose & Sh. Hoose …
– Xis al Islam oo dagaal ku baaqay …
– Dawlada federaalka ah ee Somaliya oo ku eedaysay Islaamiyiinta dilalka ka dhaca Muqdisho … http://daljir.com/
Khasaare xoogan oo ka dhashay dagaalkii Kismayo, iyo xaalad cabsi leh oo wali ka taagan.
Sh. Axmed Madoobe oo aan ka waraysanay hardanka siyaasadeed ee Kismaayo … [Dhegaysi …]